Kitra – «Poule des As»: lavon’ny Fosa Jr teo an-kianjany ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra – «Poule des As»: lavon’ny Fosa Jr teo an-kianjany ny Elgeco Plus
Nahavita ny valin’adiny ny Fosa Jr Boeny, teo amin’ny andro voalohany amin’ny “Poule des As”, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Resiny teo amin’ny kianja filalaovany ny Elgeco Plus Analamanga.
Lavon’ny Fosa Jr Boeny, tamin’ny isa tery 2 no ho 1, ny Elgeco Plus Analamanga, nandritra ny andro voalohany amin’ny “Poule des As”, dingana farany hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny asabotsy 4 aogositra lasa teo.
Nampiditra ny baolina voalohany ny Elgeco Plus, tamin’ny alalan’ny lohany, raha vao nanomboka 4 mn monja ny fihaonana. Tsy hain’ny ekipan’Analamanga anefa ny nanararaotra izay tombon’isa nananany izay fa toa lasa niaro tena fotsiny ry zalahy, ary be loatra ny fandanilaniam-potoana nataon’ireo mpilalao.
Tetsy ankilany, niezaka nandrindra ny fanafihany ny Fosa Jr, saingy tsy nety nahakobana ny mason’haraton’i Eddy Bastia, mpiandry tsatobin’ny Elgeco Plus. Io isa tokana, 1 no ho 0, io no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nitady irika hatrany ny ekipan’i Boeny, hamonoana baolina teo amin’ny fidirana faharoa. Nahitam-bokany izany, satria nosahalain’i Mario ny isa teo amin’ny minitra faha-62. Teo vao nanomboka nikorapaka ny Elgeco Plus ka nanao fanafihana totoafo. Na izany aza, mbola nahafaty ny baolina faharoa indray ny Fosa. “Pénalty”, tafiditr’i Baggio teo amin’ny minitra faha-78, rehefa voatosika tao anaty faritra tsy azo ivalozana i Sambatra. Nitarika tamin’ny isa, 2 no ho 1, ny Fosa Jr. Nifandimbiasana ny fanafihana teo amin’ny roa tonta avy eo. Saika nahasahala ny isa ny Elgeco Plus, tany amin’ny minitra faha-89, saingy nidona tamin’ny tsatoby ny dakan’i Bela. Afa-bela izany ny Fosa Jr, tamin’ity fihaonana ity.